एकतामा हलो अड्कीयोः माओवादी केन्द्रका नेता यस्तो भन्छन् ?
चैत १३, काठमाडौं ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टी एकता समानताका आधारमा हुनुपर्ने बताएका छन् । नेतृत्वमा रहने ६०/४० अर्थात् ७०/३० का आधारमा पार्टी एकता हुन नसक्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरुको धारणा छ ।
उनीहरुले समानताको आधारमा नेतृत्व रहनुपर्ने बताएपछि कुरा अल्झिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । कार्यदलमा रहेका एक माओवादी सदस्यका अनुसार नेकपा एमालेले चुनावमा आएको मतका आधारमा पार्टी एकता हुँदा संगठनको बाँडफाँट हुने र त्यसमा रहने व्यक्तिहरुको चयन हुने धारणा अघि सारेको छ भने माओवादीले एकता अब समानताका आधारमा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका नेता एवम् कार्यदलका सदस्य देव गुरुङले विगतदेखि नै समान हैसियतमा पार्टी एकता हुँदै आएकाले अब पनि एमालेसँगको एकता समान हैसियतमा हुने जानकारी दिए ।
“चुनावमा जसरी प्रतिशतको आधारमा पार्टी एकताको कुरा पछिल्लो समय आएको छ, त्यसरी हुँदैन,” गुरुङले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने, “पार्टी एकता चुनावको विषय होइन प्रतिशतको आधारमा गर्नलाई । पार्टी एकता गर्ने भनेपछि बराबरी समानताको आधारमा समान, हैसियतमा हुन्छ ।”
उनले चुनावमा जसरी नै सरकारमा सहभागीताको विषय पनि उठेको स्मरण गर्दै अब एकतामा त्यस्तो नहुने बताए ।
“पपुलर भोटको लागि के के हुन्छ हुन्छ ? कहाँ – कहाँ कस्तो खालको संगठनात्मक स्थिति छ, जनमतको अवस्था कस्तो छ ? यी लगायतका कुराहरुले चुनावमा काम गरिराखेका हुन्छन्,” उनले भने, “पार्टी एकता भनेको चुनावजस्तो होइन । समानताको आधारमा मात्रै हुन्छ । कुनै एउटा पार्टी अर्कोमा विलय हुन लागेको होइन ।”
उनले एमालेका धेरै नेता यसमा सहमत भएको पनि धारणा राखे । केन्द्रीय समिति बनाउँदा कसको कति भनेर भागबण्डा नहुने उनको धारणा छ । माओवादी केन्द्रका अर्का नेता एवम् मस्यौदा प्रतिवेदन कार्यदलका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि चुनावी प्रतिशतको आधारमा पार्टी एकता नहुने बताए ।
“चुनावमा जसरी ६० र ४० को आधारमा पार्टी एकता हुँदैन,” पौडेलले भने, “समान हैसियत, समान अस्तित्वको बीचमा संख्या अलिअलि तलमाथि हुनु स्वभाविक हो तर भागबण्डाको आधारमा हुँदै हुँदैन ।”
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सोमबार पार्टीसम्वद्ध विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको अगुवा कार्यकर्ता प्रशिक्षणको समापन गर्दै स्थानीय च्ुनावका लागि बनाएको विधि पार्टी एकताको लागि मान्य नहुने धारणा राखेका थिए ।
उनले पार्टी एकतापछि महाधिवेशनसम्म आलोपालो अध्यक्षता गर्ने र दुवै अध्यक्षको क्षेत्राधिकार समान हुने पनि बताएका थिए । एमाले नेता एवम् विधान मस्यौदा कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले संगठनको भागवन्डाले पार्टी एकताको काममा ढिलाई भएको संकेत गरे ।
“समान हैसियतमा पार्टी एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ, तर संख्या र प्रतिशतमा कुरा भएको छैन,” उनले भने । उनले संख्याको कुरा टुंगो नलागे भोलि बुधबार संयुक्त कार्यदललाई रिपोर्ट बुझाउने सम्भावना कम रहेको बताए ।
“सबै काम गरिसक्यौं, संख्याको कुरा टुंगो लागेको छैन,” उनले भने, “त्यसबारेमा टुंगो लागेपछि हामीले प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।”
तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बुधबार संयुक्त कार्यदलको बैठक बसेर सबै विषयको टुंगो लगाउने जानकारी दिए ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकतापछि तहगत संरचनाको भने टुंगो लगाइसकेका छन् । शिवनारायण गिरी/बाह्रखरी